Antoine Griezmann Oo Ka Cadhaysan In Lionel Messi & Ciyaartoyda Barca Ay Diidmo Ka Muujiyeen Heshiiska Uu Barcelona Ugu Soo Biiri Lahaa. - Gool24.Net
Antoine Griezmann Oo Ka Cadhaysan In Lionel Messi & Ciyaartoyda Barca Ay Diidmo Ka Muujiyeen Heshiiska Uu Barcelona Ugu Soo Biiri Lahaa.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa ka cadhaysan go’aanka ay Lionel Messi iyo asxaabtiisa qolka labiska Barcelona kaga soo horjeedsadeen in uu koooxda ku soo biiro.
Antoine Griezmann ayaa shaaciyay go’aanka bixitaankiisa Atletico Madrid hal sano kadib markii uu ka baxay heshiis buuxay oo uu Barcelona sanadkii hore la galay laakiin waxa uu ogaaday in ciyaartoyda Barcelona ay ka soo horjeedaan imaatinkiisa Camp Nou.
Antoine Griezmann ayaa la sheegay in uu warka qolka labiska Barcelona ee isaga ka soo horjeedsaday ka ogaaday warbixin khaas ah oo uu daabacay wargayska Sport oo la ogyahay in uu xog-ogaal u yahay arimaha kooxda Barca.
Xidiga reer France ee Antoine Griezmann ayaa sanadkii 2018 kii markii uu bilaamayay koobkii aduunka ee Russia 2018 waxa uu si lama filaan ah u saxiixay heshiis cusub oo Atletico Madrid uu ku sii joogayay isaga oo burburiyay heshiis hordhac ahaa oo uu Barca la gaadhay.
Laakiin Griezmann ayaa ka shaleeyay go’aankii uu markaas qaatay kadib markii uu koob la’aan kula dhamaystay kooxdiisa Atletico Madrid isla markaana ay xataa jamaahiirta kooxdiisa Atletico Madrid waqtiyo ku soo oriyeen.
Warka ayaa sheegaya in maamulka Barcelona ayna Antoine Griezmann waxba uga sheegin xaalada qolka labiska kooxdooda iyo in ay diidan yihiin maadaama oo ay dhibaatooyin kale ku mashquulsanaayeen.
Laakiin Antoine Griezmann ayaa shirkii jaraa’id ee Lionel Messi iyo Gerard Pique ee ka hor finalkii Copa Del Rey waxa uu arkay jawaabihii qaboobaa ee ay ka bixiyeen markii la waydiiyay haddii ay Griezmann ka doonayaan Barcelona.
Wararka ayaa sheegaya in Antoine Griezmann uu xataa isku dayay in uu xog ka raadiyo qolka labiska Barcelona maadaama oo ay ku jiraan ciyaartoy ay isku dalka France yihiin laakiin xogta uu ka helay ayaa la sheegay in ay tahay mid aan farxad galin.
Antoine Griezmann ayaa ka cabsi qaba in uu telefoon ka helo maamulka kooxda Barcelona si ay ugu sheegaan in ayna la soo saxiixan karin oo ay taasi keento in aanu Camp Nou ka ciyaari doonin.
Si kastaba ha ahaatee, wararka ayaa sheegaya in Antoine Griezmann uu u cadhaysan yahay in ciyaartoydii ay isku kooxda noqon lahaayeen ay codka fiitooda u adeegsanayaan in uu Barcelona kula soo biiro.